TopView - Codsiga loogu talagalay baaritaanka iyo sahanka - Gofumed
TopView - Codsiga sahan Jooloojiyadda iyo stakeout
Disember, 2017 GPS / Qalabka, aragti ugu horeysay, topografia
Maalin kasta waxaan aragnaa in baahiyahayaga ay isbeddelayaan iyo sababo kala duwan oo aan ku qasbanahay inaan ku guuleysano barnaamijyada kala duwan ee software-ka, GPS, iyo Total Station, mid kasta oo leh barnaamij kala duwan, baahida waxbarasho ee nidaam kasta, waxaynu leenahay xog-is-waydaarsi la'aan, waxaana badanaa aan macquul aheyn in xog laga helo hal nidaam oo kale.
TopView waa Nidaamka Universal oo loogu talagalay in uu la shaqeeyo barnaamij kasta oo PC, PDA kasta, GPS kasta, Dhammaan Saldhigga, dhamaan nooc kasta. Waxaa soo saartay Pié de Obra oo loogu talogalay xirfadleyda dhinacyada, halkaas oo ah habab aan dhammaad lahayn oo loogu talagalay in lagu fududeeyo shaqada goobta gudaheeda. TopView wuxuu isu keenaa aqoonta wax ka badan 30 khibrad badan iyo in ka badan 500 Professor Professionals.
TopViewPc waa nooc ka mid ah PC kasta, Laptop, ama PC Tablet, oo rajeynaya in uu yahay nidaam gaar ah wax kasta.
-Anna Barnaamijka Nidaamka Howl-galka.
- Isku mid ah Software oo loogu talagalay Dhammaan Saldhigyada Total.
- Software isku mid ah oo dhan GPS.
- Hal barasho oo loogu talagalay Wax kasta.
Hawlaha abaabulan iyo kuwa diyaarsan
- In loo qaabeeyo hab cad oo mug leh, wuxuu leeyahay hab fudud oo la heli karo.
- Dhamaan Modules waxa ku jira dariishado la shaqeeya qofka isticmaalaya qaab cad oo mug leh, isaga oo ka codsanaya xogta lagama maarmaanka ah daqiiqad kasta oo hagaya tan arrintan kasta.
Soo dejinta iyo soo saarista xogta
- Si buuxda loogu habeeyey badi barnaamijyada PC ee inta badan lagu isticmaalo Spain.
- Ballanqaadka in la cusbooneysiiyo oo la qabsado qaababka dhoofinta iyo soo dejinta cusub ee barnaamijyada hadda iyo kuwa cusub ee laga yaabo inay soo baxaan.
- Soo dejinta iyo soo dhoofinta tooska ah iyada oo aan dib-u-dhicin dhexdhexaadin ah.
- TopViewPc waa qalab habboon hawshan, inkastoo noocyada Ce, Jeebka, iyo WorkAbout ay leeyihiin hanti isku mid ah
- TopView waxay u oggolaataa rarista iyo daawashada sawirada BMP, asalka TIF, JPG iyo sidoo kale qalabixinta isku midka ah iyo diiwaangelinta qalabka loo adeegsado isticmaalka mustaqbalka.
- Waxa kale oo u ogolaanaya loading iyo arkaysid asalka DXF, billabo halka BMP, TIF, BMP, jidaynayey maareynta layers CAD iyo isticmaalka for da'ada yar oo dhan walxaha CAD.
- Waxay u ogolaataa muuqaalka sawiradaas ku jira Iskuduwidda iyo Istaraatiijiyada Iskudhafka iyo sidoo kale in Meelo Dhismayaasha Dijital ah ee Dhulalka. Xaaladda dambe, baahida loo qabo in lagu dhajiyo sawirada oo hagaya macaamilaha MDT si joogto ah sida koorsada Golf-ka ah halka joogtada ah ee degaanka aysan caawinaynin helitaanka cagaarka iyo cagaarka.
- TopView wuxuu ku darayaa maaraynta muraayadaha gundhigga u oggolaanaya abuurista, tirtirida, Furfurida / Ka-joojinta, iyo qoondaynta Layliga hadda oo xogta laga qaato berrinka la duubay. Waxa kale oo ay ixtiraameysaa lakabyada ka imanaya Soo Dejinta DXF. Dhaqaajinta lakabka waxay u oggolaaneysaa dardargelinta habraaca garaafka iyo maareynta xogta
- TopView waxay ku jirtaa hababka cusub ee cusub iyo qaabka dareenka muuqaalka ee la xidhiidha hababka caadiga ah ee ay ka dhigayaan TopView barnaamijka ugu dhammeystiran ee suuqa.
- Dhibcaha Iskeelka ah ayaa la galiyaa gacanta ama ku dhejin Sawirka.
- Qodobbo ku jira faylka la soo dhoofiyey ama horey loo soo qaatay.
- Xaaladaha internetka.
- Dhibcaha kubbadda.
- Dhibcaha laga qaado Kacsanaanta ama Weyn.
- Qodobka Xidhiidhka Isgaadhsiinta, Iskudhin, iyo Superelevations.
- Xarumaha Isku-xirka XYZ.
- Xarumaha Iskuduwaha Juqraafiga.
- Qaybaha Cajeadas.
- Ku qor qeybaha.
- Qaababka Dhismaha Dijital.
- Hay'adaha CAD ee DXF / DWG.
- Qaadashada Tilmaamaha Hore ee XYZ iyo Juquraafi.
- Wuxuu isku xiraa isku-xireyaasha (Tachymetric).
- Talaalka transversal.
- Qaadashada dheeriga ah.
- Qodobbada la falanqeeyay ee la xidhiidha Axis.
Shaqada Linearka ah
Qeybaha Cajeadas. Qeybaha Xisaabinta Aqoonsiga Profile by barnaamijka PC kaas oo TopView soo rogaa macluumaadka dhibcooyinka Xirfad kasta oo lagu amrey in la kordhiyo Pk iyo Barakaca. Qeybahaasi waxay ka mid yihiin meelo lagu qeexay barnaamijka Pc iyadoo ku xiran dhulalka teoriga ah.
Qeybaha Nooca. qeexay loox widths TopView iyo garabka, Shaxan kala saxiixday + + line darifka Hip, miiska Superelevations, miiska iyo Eccentricity Dhexdhexaad, dulinka Shaxda iyo jiirada Shaxda iyo qaybaha Cunetas. Maya aalado hore oo la heli karo oo barnaamijkuna wuxuu noo ogolaanayaa inaan go'aan ka gaarno haddii aan rabno Dismantle ama Embankment kasta ee Pk.
- waxa u ogolaanaya in ay saamiga baxay mar kasta teori in qeexayaa qaybta PK hadda oo meel fog ka barta baxsan iyo sare u qaadis xataa ogolaanaya retranqueo soo socda mid ka mid ah laylan ee ku dhereran vertex la doortay.
- Waxay u oggolaataa dib-u-laabashada wadajirka ah ee Qodobada Theoretical iyo qiyaasidda ee Wicitaan kasta oo ka mid ah Qeybta, sida Boosta.
- Wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku qorto qodobbada Staked ee Xakamaynta Tayada ama Transversals.
- Wuxuu isku daraa qeexitaanka qiyaasta iyo sawirka. Dhamaan xubno labada parametric iyo dulinka waxaa linearly interpolated, jidaynayey laylan ee maamulka in si tartiib tartiib ah isbedel jiirada (Tali in Abanico), roadsides transformations in "V" inay iska ilaawaan "U", berms muuqda iyo baaba'aan, berms kuwaas oo kor iyo hoos u maraya jiirada, iwm.
- Waxay u oggolaataa abuurista xeeladaha si qunyar ah u qeexaya, gawaarida, boodboodka ee dhumuc adag oo adag oo ka mid ah arrimahan, iyo shax kasta, si kastaba ha ahaatee waxay u muuqataa inay u muuqdaan.
- Iskuday miiska superelevation iyadoo la raacayo qaybta "Type Type" oo loo adeegsado Axes kala duwan.
- Sida Qaybaha cajeadas waxa la oggol yahay si ay u qoraan qodobada rethought in Transversal file a sidaas darteed in pass hal madaxa, cagta, dhidibka ka dhigi kartaa, oo waxay qaadan doonaan Land Transversal ee Real.
Nidaamka Dijital (MDT)
- Iskudhin ahaan gebi ahaanba muuqata sawirada saddexagalka ah ee aynu ku jirno iyo kordhinta Cota tan.
- Waxay kuu oggolaataa inaad keydiso dhibcaha loo qoondeeyay adigoo si toos ah ugu codsanaya in ay ku muujiyaan sadex-xagal oo ay ku taal iyo qaladka kor u qaadista.
- Waxay u ogolaataa in ay dib u eegto Node sida haddii ay ahayd dhibco caadi ah.
- Waxay u oggolaataa in lagu rakibo sawirro tifaftiran oo TIF / JPG / BMP / DXF / DWG ah si loo sii wanaajiyo.
- Dhammaan Saldhigga: Waxay u oggolaataa isticmaalka Nidaamka Fidinta Nidaamka Fudud (Flat) iyo UTM. Marka laga hadlayo UTM, barnaamijku wuxuu xisaabiyaa isku dhafanaanta anamorphosis ee akhriska kasta.
- GPS: Waxay u ogolaanaysaa La shaqaynta Datum, iyada oo ay la socdaan Nidaamka Isku-xirnaanta Deegaanka (SCL), ama labadaba. SCL waxay xisaabinaysaa habka gaarka ah ee isbedelka XY iyo isbedelka Z si loogu qaabeeyo si kaamil ah Real Terrain. Isticmaalka SCL daro utility ah (control ante hore) taas oo ka caawisa xaqiijin saxnimada macluumaadka (wadataa degaanka gacanta si khalad ah u galeen, wadataa dhuleed qaaday duurka dhibcood khalad, nidaamka kala soocin oo waa wadataa maxaliga ah "UTM ama Flat ").
Xakameynta Moobaylka (Nidaamka Meeleynta Cusub).
- Waxay u ogolaataa in ay kudheesho saldhigga GPS ee meel kasta.
- Waxay tirtiraysaa baahida loo qabo Shaqaalaha Qalabka Indhaha.
- Iska yaree xariiqda saldhigga adigoo ku helaya saxsanaanta iyo helitaanka RadioModem.
- Joogto dheer oo leh GPS-ga wuxuu u oggolaanayaa inuu beddelo Sensor Base si uu u noqdo fogaansho weyn iyada oo aan la yareeynin line line.
- Hawlaha Goobta ee horayba u jirey GPS Base ayaa kuu ogolaanaya inaad isticmaasho tan, inkastoo jaangoynta juquraafiyadu aan isku mid ahayn kuweena, awood u leh in aan dib u qabsano Xarunteena GPS-ga ee Mobile-ka iyo waxaanu leenahay laba dareemayaal si ay u qabtaan shaqada.
- TopView ogolaanaya oo dhan modules da'ada furan file ah ee isku midka ah kaas oo qodobada ay dhab calaamadeeyay beerta laga diiwaangeliyey la height dhabta ah ee dhul automating code barta duubay oo muujineysa magaca file oo u yimid ku duwo in ay qaabeeyaan , lambarka dhibcood, iyo khaladaadka lagu ogaanayo marka la dejinayo. Dhamaan hal tallaabo.
- Nidaamkani waa qalab fiican oo loogu talagalay Nidaamka Tayada oo kordhiya xawaaraha, otomaatigga, iyo waxtarka.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in la Total Station kasta oo la GPS kasta oo hab RTK ama ma guurto ah, waayo post-processing, si la beddelo cable ee isku xirta PDA la qalab loo isticmaali karo sii wadaan in ay u shaqeeyaan isticmaalaya files xogta isla shaqeeyaan . Sidaas awgeed waxaan ku bilaabi karnaa shaqo GPS iyo ka dibna qaadan qodobbada aan la qaadan karin, u dhowaanshaha dhismo ama sabab kale, oo leh Station Station oo leh isbeddel telefoon iyo xulashada kaliya.
Sidoo kale xusid mudan waa in ay waxaa loogu tala galay in la dhamaystiro barnaamijyada caadi ahaan loo isticmaalo in Spain for PC sida Autocad, Clip, MDT, ISTRAM iyo Ispol, Cartomap, Protopo, iyo kuwa kale, ay awoodaan in ay soo dhoofsadaan iyaga ka ulahooda wareejiya qorshaha iyo sare u qaadis, liiska Saldhigyada , liistada Isku-dubaridaha Layoutka, liistada Qaybaha Cajeadas, iyo Saldhigga dhoofinta, Iskuduwaha, Magdhawga Cadaalada, Qaybaha Magaalooyinka, iwm.
Inaad noqoto barnaamij lagu horumariyey Spain, barnaamijka oo idil, buugyada oo dhan iyo barnaamijyo dhamaystiran oo loogu talagalay PC, iwm ... wuxuu ku qoran yahay Isbaanish oo lagu habeeyey degaannada caadiga ah ee Software-ka iyo Softwareka ee Spain.
Beddelaadda barnaamijka si ay u hesho noocyada waraaqaha soo dejinta ama dhoofinta ayaa lagu soo geli doonaa wakhtiga ugu gaaban ee suurtogalka ah.
Ka soo qaad TopView
Post Previous«Previous Ku Xidhaan Khariidad Gaar ahaan Khariidadda Wanaagsan ee Microstation
Post Next Dhulkani kuma aha iibkaNext »
Hal Jawaab u Jawaab "TopView - Arjiga loogu talagalay baaritaanka iyo sahaminta"
Tilmaamaha isagu wuxuu leeyahay: